Pakistan: Diyaarad rakaab oo PIA ah oo ku burburtay Karachi, – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Pakistan: Diyaarad rakaab oo PIA ah oo ku burburtay Karachi,
Pakistan: Diyaarad rakaab oo PIA ah oo ku burburtay Karachi,
Islamabad, Pakistan – Ugu yaraan 54 qof ayaa ku dhintey, iyadoo cabsi badani laga qabo inay dhintaan, ka dib markii diyaarad rakaab ah oo nooceedu ahaa A320 ay ku burburtay guri ay dagan yihiin xilli ay kusii jeedaan garoonka diyaaradaha ee ku yaal koonfurta Karachi ee Pakistan, saraakiisha ayaa sidaas leh.
Ugu yaraan laba rakaab ah oo ka mid ah diyaaradda Pakistan International Airlines (PIA) duulimaadkeeda PK-8303 oo laga soo qaaday bariga magaalada Lahore ilaa Karachi ayaa ka badbaaday shilka Jimcihii, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa u sheegay Al Jazeera.
Ugu yaraan 91 rakaab ah ayaa saarnaa diyaaradda, sida laga soo xigtay sarkaal rasmi ah oo rakaab ah oo la wadaagay Al Jazeera saraakiisha.
Konton iyo afar qof ayaa dhintey, afhayeenka wasaaradda caafimaadka Meeran Yousuf ayaa khadka taleefanka ugu waramay Al Jazeera.
Waxaan kaliya oo aan awoodnay in aan aqoonsano saddex ka mid ah maydadka illaa hadda, gubashada daran awgeed, ayay tidhi.
Ugu yaraan lix qof oo garoonka ku jiray markii diyaaradda ay ku burburtay guryo ku yaal deegaanka dadku ku badan yahay ee Karachi, oo ku dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada, ayaa laga daweeyay dhaawacyadooda, ayay tiri.
“Diyaaraddayada [Airbus] A320 oo ka timid Lahore una aaday Karachi waxay ku jirtay heer kama dambeys ah,” ayuu yiri madaxa PIA Arshad Malik farriin muuqaal ah oo la sii daayay ka dib shilka.
“Erayadii ugu dambeeyay ee aan ka maqalnay duuliyahayagu wuxuu ahaa in ay jirto cilad farsamo oo markii ugu dambeysay loo sheegay in uu leeyahay labada waddo ee ay heli karaan si ay u sii wadaan. Laakiin duuliyuhu wuxuu go’aansaday in uu doonayo in uu wareego.”
Diyaaradda ayaa intaa kadib si deg deg ah u weyday meel udhaw waxayna ku burburtay garoon diyaaradeed oo kuyaala xaafada Model Colony, goobjoogayaal ayaa usheegay warbaahinta gudaha.
Qaybo badan oo qiiq madow ah ayaa kor uga kacay guryaha ku yaal jidadka cidhiidhiga ah ee xaafadaha, iyada oo muuqaalka telefishanka uu muujinayo guryo dhowr ah oo ka burburay saameynta ay leedahay diyaaradda
Qeybo ka mid ah diyaaradda, oo ay kujirto albaabka ka bixista xaaladda degdegga ah, ayaa lagu arkay waddooyinka
Milatariga Pakistan ayaa sheegay inay diyaarado helikobtar ah oo qiimeeya khasaaraha ayna gacan ka gaystaan ​​sidii dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay loola carari lahaa isbitaalada.
Xaalad deg-deg ah ayaa lagu dhawaaqay dhammaan isbitaallada magaalada, iyadoo durba laga soo qaaday cudurka faafa ee cudurka ‘coronavirus’, wasiirka caafimaadka ee gobolka Azra Pechucho ayaa u sheegay saxafiyiinta.
Waxaan samaynaynaa baaritaan DNA ah oo ku saabsan maydadka si loo aqoonsado oo loo siiyo qoysaskooda, “ayay tidhi.
“Waxaan horeyba ugu sugnaa xaalad deg deg ah sababtuna tahay COVID, waagii horeba waan feejignaaneynay… oo hadda waxaan sidoo kale gelinay qeybaha qalliinka sidoo kale.”
Previous articleHilal Shawwal in Saudi Arabia and Eid could not be seen
Next articleKuuriyada Waqooyi Kim ayaa wacad ku martay inuu sii xoojin doono dagaalka nukliyeerka